Chiitiko Square Gate
Zvishandiso: seKutanga gedhi uye Pedzisa gedhi reFpv drone racing, zvakare inogona kushandiswa mune akawanda akasiyana mamiriro senge mhemberero chitoro kuvhurwa, mitambo promo, kunyangwe seKutanga kana Kupedzisa mutsara wezvinoitika zvekirabhu zvinonakidza.
Chiitiko square gedhi, seKutanga gedhi uye Pedzisa gedhi reFpv drone racing, zvakare inogona kushandiswa mune akawanda akasiyana mamiriro senge mhemberero chitoro kuvhurwa, mhemberero promo, kunyangwe seKutanga kana Pedzisa mutsara wezvinoitika zvekirabhu zvinonakidza.Graphics inogona kugadzirwa, Tough naironi jira rakasimba rekushandisa mukati / kunze.
(1) Composite fiber pole, yakasimba kwazvo kwenguva refu yekushandiswa kwekunze.
(2) Zvitatu-chidimbu system uye nyore kutsiva pani.
(3) Seti yega yega inouya nebhegi rekutakura, rakareruka uye rinotakurika.
(4) Yakasanganiswa neMureza wekona/ Arch gatekumisikidza racing circuit.
(5) Mhepo hoko uye tambo inosanganisirwa, ita kuti gedhi rigadzikane mumhepo.
(6) Yakasiyana-siyana yemabhesiiripo kuti ikwane akasiyana application
Mxh3x3 Diki Size 3*3m 1.5m
Mxh4x3 Kukura Kwepakati 4*3m 1.5m
Zvakapfuura: Boundary Markers
Zvinotevera: Kunze Arch Gate